Tuesday June 16, 2020 - 13:13:19 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hay'adda Human rights watch ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay kusoo bandhigtay waxyar oo kamid ah xasuuqii ay ciidanka Mareykanka ka geysteen Koonfurta dalka Soomaaliya sanaddan 2020.
Warbixinta oo tobanaan Page ka kooban ayaa isdul taag ku sameysay duqeymo dad badan lagu dilay oo badankood ka dhacay gobolka Sh/hoose oo aan sidaas uga fogeyn magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
"Laba duqeyn oo horraantii sanadkan ka dhacay Soomaaliya ayaa lagu dilay 7 qof shacab ah waana xadgudub cad oo lagu sameynayo qawaaniinta dagaalka, ciidamada Mareykanka ma sameyn baaritaan ku filan oo ku saabsan duqeyn lagu dilay haweenay ku sugneed gurigeeda 2,Feberaayo ee lasoo dhaafay iyo weerar kale oo dhacay 10 March 2020 kaas oo lagu dilay 5 rag ah iyo canug yar kadib markii ay diyaaradi duqeysay gaari ay la socdeen" ayaa lagu yiri warbixinta.
Hay'adda HRW ayaa mas'uuliyadda gummaadkan dhabarka usaarisay taliska ciidamada Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM waxayna ku eedaysay in uu ka been sheego natiijada ka dhalata duqeymaha uu ka geysanayo Soomaaliya oo dhammaantood uu ku sheego in lagu beegsaday dagaalyahanno katirsan Shabaabul Mujaahidiin.
"Human Rights Watch ma helin wax daliil ah oo caddaynaya in goobaha weerarada xagga cirka ah lagu beegsaday ay ahaayeen bartilmaameedyo melleteri oo ay leeyihiin dagaalayahannada Islaamiga Al Shabaab, hoggaanka Mareykanka Afrika iyo xukuumadda soomaaliya midkoodna lama xiriirin ehellada dhibanayaasha mana sameyn baaritaanno si ay uqiimeeyaan sheegashooyinkooda ayna usiiyaan magdhow" ayaa lasii raaciyay bayaanka kasoo baxay HRW.
Hay''addan sheegata in ay udooddo xuquuqul insaanka ayaa warbixinteeda si qota dheer uga hadasha sida taliska Mareykanka qaaradda Afrika ugu dhiirado ka been sheegidda duqeymaha laayaanka ah ee uu ku hayo shacabka soomaaliyeed iyadoo soo qaadatay bayaanaantkii mareykanku uu ku sheegtay duqeymo dad shacab ah lagu gummaaday kuwaas oo badankood ka dhacay Sh.Hoose.
HRW waxay aad udhaliishay natiijooyinka kasoo baxa baaritaannada dhif iyo naadirka ah ee Africom ku sameyso duqeymaha ay ka geysanayo soomaaliya.
"Melleteriga Mareykanka masameyn baaritaanno dhab ah oo ku saabsan duqeymihii ugu dambeeyay ee uu ka geystay Soomaaliya laguna dilay laguna dhaawacay dad rayid ah kuwaas oo ah xadgub cad oo ka dhan ah qawaaniinta dagaalka" sidaas waxaa tiri Laetitia Bader oo ah agaasimaha hay'adda HRW ee geeska Afrika.
Intii u dhaxaysay bishii Febraayo iyo May ee sanaddan 2020 Human Rights Watch waxay khadka taleefanka ku wareysatay illaa 14 qof oo ay kamid yihiin ehelada dadkii lagu dilay weeraradii Febraayo iyo Maarso.
Dadkaas la wareystay ee ehelkoodi lagu dilay duqeymaha Mareykanka afar ka mid ah ayaa booqday goobtii dadkooda lagu laayay waxayna qiimeeyeen xogaha rasmiga ah sidii ay wax udhaceen iyagoo soo aruuriyay wixii macluumaad ah ee ay heli kareen.
Warbixintan kasoo baxday hay'adda caalamiga ah ee HRW ayaa sidoo kale lagusoo qaatay duqeymo dad rayid ah lagu laayay oo mareykanku uu ka geystay gobollada Jubbooyinka gaar ahaan Jubbada dhexe, duqeyntaas ayaa lagu dilay qof dumar ah waxaana ku dhaawacmay carruur iyo haweenay 70 sana jir ah.
inkastoo warbixinta kasoo baxday hay'addan ay aheyd mid aad uyar marka loo eego jariimooyinka uu mareykanku ka geysanayo soomaaliya hadane waxay adkaynaysaa in aan lagu kalsoonaan karin sheegashooyinka beenta ah ee mareykanka ka imaanaya isagoo shacab xasuuqay ayuu hadane ku tilmaamayaa in uu dilay Argagaxiso alshabaab ah.
Halkan ka akhriso warbixinta oo dhammeystiran